Baro Taariikhda Sameynta Fasalka
Had iyo jeer waa wax lala yaabo in dib loo jaleeco taariikhda oo la ogaado sida aan horumar u sameyneyno. Sidaas, fikrad kasta sida farshaxanka dhalada galaasku isu beddelo waqti ka dib? Aynu dul istaagno taariikhda qaar! Taariikhda Muraayadda Muraayadda ugu horreysa ee loo yaqaan dhagax-tuurka ...
Sidee loo nadiifiyaa dhalada ka dib marka saliida muhiimka ah la isticmaalo?
Qalabyo badan oo nolol maalmeedkeena ka mid ah waa in la nadiifiyaa. Marka waxyaabaha qaarkood la isticmaalo, waa wax dhib badan in la nadiifiyo marka aad rabto inaad isticmaasho. Had iyo jeer waxay dareemaan inay jiri doonto dareen nadiifin, laakiin dhalada saliidda, way ku adagtahay dhaqitaankeeda ...
Bamboo Mason Jar dabool Af joogto ah oo leh god Straw
Cabbirka: Dhexroor gudaha ah: 54mm (2.13 ”), dhexroor banaanka ah: 70mm (2.76”), dhexroorka daloolka cawska: 15mm (0.59 ”). Waxyaabaha Dabiiciga ah iyo dib loo cusboonaysiin karo: Daboolka laga sameeyay 100% boqolkiiba bamboo dabiici ah oo la farsameeyay iyo silikoon heerka cuntada ah. Maya BPA, ...
Hordhac kooban oo habka buufinta dhalada galaaska ah
Khadka wax soo saarka ee lagu buufiyo dhalada galaaska guud ahaan wuxuu ka kooban yahay waab buufin, silsilad sudhan iyo foorno. Waxa kale oo jira daaweynta hore ee biyaha, dhalada dhalada ah, oo ubaahan feejignaan gaar ah waa dhibaatada ka dhalata bullaacadaha. Sida tayada ...
Isbeddelada heerkulka daran awgood, muraayadda aasaaska ee annealedka ku jirta waxay ku jirtaa geedi-socodka sameynta. Heerkulka heerkulka ee u dhexeeya lakabyada gudaha iyo dibedda ayaa la soo saaray, waxaana ugu wacan kala duwanaanshaha qaabka, dhumucda, iyo heerka qaboojinta finis ...
Dhalada dhalada ah mala jabi karaa oo dib looma isticmaali karaa? Qodobbada ugu muhiimsan ee laga sameeyo waxyaabaha galaaska ka samaysan galaaska jaban
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo si deg deg ah loo horumarinayo cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda, warshaddii hore iyo tii hore ee dhalooyinka ayaa dib loo abuuray, waxaana soo baxay alaabooyin kala duwan oo muraayado ah oo shaqooyin gaar ah leh. Muraayadahaani ma ciyaari karaan oo keliya faafinta iftiinka dhaqameed ee ...
Dhalooyin badan oo dhalo ah ayaa nolosha gabay ka dhigaya uses 8 adeegsi hal abuur leh oo dhalooyinka mason ah
Hordhac: Mason Jar, dhalo dhalo ah oo aan u muuqan wax qaas ah, hadda waa qurxin aad u fiican oo caan ka ah adduunka oo dhan. Markii hore, dhalada Mason waxay ahayd quraarad quraarad ah oo leh dabool bir ah, oo si adag loo xiray, ...
Qarsoodiga goobooyinka dhalada quraaradaha ku jira
Dhalooyinka quraaradaha qaarkood waxay ku arki karaan goobooyin qaar dhalada, maxaa jira? Maanta Rongtai Glassware wuxuu qof walba u sharixi doonaa: 1. Waxyaabaha ku jira budada ultrafine ee ku jirta dhalada dhalada ah alaabta ceyriinka ah aad ayey u sarreysaa, walxaha wanaagsanna waa kuwo aad u daran marxaladda ugu horreysa ee ...
Mustaqbalka horumarinta diiradda warshadaha weelka dhalada galaaska
Dhalada dhalada iyo weelka weelasha waa warshad hab-nololeedka soo jireenka ah iyo warshad lama huraan u ah horumarka dhaqaalaha qaranka. Tobankii sano ee la soo dhaafay, si dhakhso leh ayey u horumartay oo warshaduhu waxay ku soo mareen isbedelo waaweyn. Horumarka joogtada ah ...
Si kooban oo ku saabsan waxyaabaha dhaawacaya jilicsanaanta dhalooyinka
1. Marka muraayadda maran ay ku dhacdo caaryada hordhaca ah, si sax ah uma soo geli karto caaryada hordhaca ah, waxayna si xad dhaaf ah ugu xoqaysaa darbiga caaryada si ay u sameysmaato meerisyo. Ka dib markii la afuufo, kala-baxyada ayaa faafay oo weynaaday, iyagoo isku laabaya jirka dhalada galaaska. 2. Maqaska ...
Intee in leeg ayaad ka ogtahay midabka dhalooyinka khamriga?
Midabada dhalooyinka khamrigu waa cagaar khafiif ah, aan midab lahayn oo hufan, bunni, qaarna waa buluug. Saamayn intee le’eg ayuu ku leeyahay midabka dhalooyinkaasi? Xaqiiqdii, waxaa jira sheekooyin badan oo ku jira midabka dhalada khamrigaan. 1. Maxaa gr ...
10 sababood oo saameeya tayada dhalooyinka
Aan kaaga warramo habka loo soo saaro dhalooyinka quraaradaha ah. Marka hore, waa inaan qaabeyno, go'aamino oo soo saarno caaryada. Waxyaabaha ceeriin ee dhalada ah waxaa laga sameeyaa ciid quartz ah (hanti: macdano silicate ah) maadada ugu weyn ee ceyriinka ah, iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah waxaa loo dhalaaliyaa liq ...
Maxay yihiin shuruudaha dhalooyinka quraaradaha loogu talagalay daabacaadda shaashadda xariirta
Maalmahan, heerarka nololeed ee dadku waa ay sii kordhayaan marba marka ka dambeysa, shuruudaha tayada nolosha ayaa sare u sii kacaya. Si loo daboolo baahida macaamiisha, dhalooyinka quraaradaha ayaa sidoo kale la daabacay. Marka, waa maxay shuruudaha loo baahan yahay ...
Habka Soosaarka ee Caaryada Dhalada ah
Dhalooyinka iyo muraayadaha kale waa badeecooyin muhiim u ah warshadaha cusbada maalinlaha ah ee loo yaqaan 'silicon acid salt', iyo sidoo kale badeecooyin dhaqameed ku jira warshadaha wax lagu baakadeeyo. Sanadihii la soo dhaafay, dhacdooyinka badbaadada cuntada ayaa si isdaba joog ah u dhacay, taas oo kicisay fekerka weyn ...
Heerka hawlgalka ee dhalada galaas warshad ash ash ash ceeriin ayaa la filayaa inuu dib u soo laabto
Dhalooyinka iyo muraayadaha kale waa badeecooyin muhiim u ah warshadaha cusbada maalinlaha ah ee loo yaqaan 'silicon acid salt', iyo sidoo kale badeecooyin dhaqameed ku jira warshadaha wax lagu baakadeeyo. Sanadihii la soo dhaafay, dhacdooyinka badbaadada cuntada ayaa si isdaba joog ah u dhacay, taas oo aro ...
Dhalooyinka quraaradaha ah waxay noqdeen qayb lama huraan u ah warshadaha dawooyinka
by idaacadda Subaxnimo 20-09-05
Maaddaama ay tahay walxo aan dabiici ahayn, muraayaddu waxay leedahay waxqabad deggan, jilicsan oo hufan, waxayna si gaar ah ugu habboon tahay baakadaha, keydinta iyo ilaalinta tayada daawooyinka. Isla mar ahaantaana, qiimaha muraayadaha ayaa ka jaban marka loo eego kuwa kale ...
Sida loo doorto warshad dhalada dhalada ah - waxay kuxirantahay dhinacyadan
Marka hore, ma ahan mid jilicsan. Haddii dhalooyinka jilicsan ee jilicsan ay fududahay inay sababaan khataro kala duwan oo qarsoon, waxay halis gelinayaan nabadgelyada iyo caafimaadka dadka. Marka labaad, qurux badan, dhalo tayo sare leh oo dhalo ah ayaa badanaa aad u hufan. Ma jiraan wax saxaro ah ...
Warshad Daabacaadda Cusub
Ma u baahan tahay daabacaad caadiya oo ku saabsan daboolka biraha? Miyaad ka walwalaysaa waqtiga hogaaminta? Looma baahna in laga sii walwalo mar dambe. Waxaan leenahay Warshad Daabacaadda oo noo gaar ah hadda. Waxaan nahay Xuzhou Troy Co., Ltd. Sida alaab-qeybiyaha baakadaha xirfadeed, waxaan kaliya ma aha ...
Dhalada Dhalada ah ee loo yaqaan 'Glass Vodka'
by idaacadda Subaxnimo 20-07-06
Waa maxay Vodka? Waa maxay farqiga u dhexeeya Vodka iyo Gin? Vodka waa ruux la nadiifiyey oo inta badan laga sameeyo miraha ama baradhada. Dhaqan ahaan, khamriga cad waa caan ...
Dib-u-warshadaynta Muraayadda: Abuuritaanka Qashin Dheeraad ah
Muraayadda waxaa laga sameeyaa alaabta ceeriin oo waara oo dabiici ah. Waa baakadaha la doorbiday ee macaamiisha ka welwelsan caafimaadkooda iyo bay'adooda. Macaamiisha ayaa doorbidaya baakadaha dhalada ah si ay u ilaaliyaan dhadhanka sheyga ama waxyaabaha ...
Qaabka Saxda ah ee Loogu Sameeyo Nadiifiyaha Muraayadaha Guriga lagu Sameeyo
Khamri Waa Mucjiso Ka Mid ah Samee muraayaddaada ka nadiifi walxaha laga yaabo inaad horey ugu haysatay armaajo-gaaga. Uma baahnid inaad lacag badan ku qarash gareeysid nadiifiye laga yaabo inuu kiimiko leeyahay li ...
Sida loo furo Weel adag
ka-wareejinta WIKIHOW https://www.wikihow.com/Open-a-Difficult-Jar Ma jiraan wax ka xun gaajaynta iyo haysashada weel cunto ah oo aadan furi karin. Haddii daboolka uu ku dhagan yahay pickles-kaaga, ama aadan geli karin subagga looska, ha walwalin ou ...
Sidee Loo Sameeyaa Udgoon Nadiifinta Nadaafada Udgoon Tallaabo Talaabo ah
Khamri waa mid ka mid ah xalalka dabiiciga ee ugu fiican meeraha, laakiin dadka badankood ma jecla urta. Runtii way fududahay in la qaato khal cad oo dufan cad oo dufan leh loona beddelo qamri canab nadiif ah oo nadiifiya taas oo ka dhigaysa nadiifiyahan horeba cajiibka u leh xitaa ka sii xoog badan iyo sidoo kale mo ...
Sida loo doorto saliida qumbaha ugu fiican ee bikrada ah
Ma haysaa fikradda ugu yar ee sida loo doorto saliidda qumbaha ugu fiican ee bikradda ah ee loogu talagalay faa'iidooyinka caafimaadka? Waxaan dhadhamiyay noocyo badan oo saliidan qumbaha ah ee aan la sifayn oo laga keenay dalal kala duwan 10 + sano ee la soo dhaafay. Culus ...
Maxay dhalooyinka dib-u-warshadayntu muhiim u yihiin?
Ku dhowaad baakadaha ka samaysan dhalooyinka dib ayaa loo isticmaali karaa. Laga soo bilaabo dhalooyinka dhalada ah ee loogu talagalay macaanka ama qajaarka ilaa dhalooyinka dhalada ah ee biirka ama ruuxa, markaad ku dhammeysid sheyga gudaha, uma baahnid inaad tuurtid baakadka, waad dib u warshadeyn kartaa inste ...
KAAGA LEH DHALASHADAADA: Sida Loo Sameeyo Dhalo Caag ah oo Dhalo ah
Dhalooyinka quraaradaha ah ayaa kaa caawin kara inaad naqshadeyso oo aad sameysid weelkaas saxda ah ee ka dhex muuqda dadka. Macaamiishaadu waxay u aqoonsan yihiin noocyo badan dhalo ama qaab baako - oo ay la socoto naqshadeynta baakadaha caadiga ah, waxaad hubin kartaa in khadkaaga alaabtu uu yahay ju ...
Ku saabsan Waxsoosaarka 3: Waa maxay sababta MOQ ee wax soo saarku u sarreeyo
Alaabtayada ugu muhiimsan waa inta badan isticmaalka weelasha dhalada ee maalinlaha ah, oo ka samaysan galaaska liinta ee soodhaha ah. Guud ahaan waxaa soo saaray mashiin otomaatig ah. Hada mashiinada aan isticmaalno waa 2 nooc: Mashiinka IS iyo 8S mishiinka. (Pls eeg sawirada hoose) Guud ahaan, waxaa jira shuruudo o ...
Ku saabsan Wax soo saarka 2: Mashiinka Waxsoosaarka
Alaabtayada ugu muhiimsan waa inta badan isticmaalka weelasha dhalada ee maalinlaha ah, oo ka samaysan galaaska liinta ee soodhaha ah. Guud ahaan waxaa soo saaray mashiin otomaatig ah. Hada mashiinada aan isticmaalno waa 2 nooc: Mashiinka IS iyo 8S mishiinka. (Pls hoos ka daawo sawirada) ...